Iwe unonyatso ziva here kutora mukana wemastock rebound? | Ehupfumi Zvemari
Iwe unonyatso kuziva nzira yekutora mukana wekudzoka mumusika wemasheya?
Kana paine kufamba kwakajeka kwechimiro mumakiti, hapana chimwe kunze kwekudzokororwa. Vashoma vashoma uye varipakati varimari havana kumbonzwa nezve ichi chakakura chimiro mumisika yemari. Huye, iwo mabhonji ane yakanyanya kudzoreredzwa yechengetedzo dzekutengesa pachena, indices uye zvikamu. Ivo vanonyanya kushandira kutengesa yakavhurika nzvimbo. Kunze kwekuti tarisiro yako seanodyara haiende mukati nepakati nepakati.
Mushure mekurangwa zvakakomba mumisika yemari, kupora kunogadzirwa izvo ndezvechinguva. Kubudikidza nema bounces, izvo inogona kupedza zuva rimwe chete, kana, pane zvinopesana, wedzera kune akati wandei ezvokutengeserana zvikamu uye uwanezve chikamu chekoteti yemitengo yayo. Kudzoka kuri nyore kuziva uye hakudi hunyanzvi hwehunyanzvi kuitira kuti iwe uzive kuti uri kutarisana neichi chiitiko chakajairika mumusika wemasheya.
Kana iwe uri muteveri wenguva dzose wehunyanzvi midhiya mune yekudyara nyika, iwe unozoshandiswa kune ino izwi. Hazvishamise kuti ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nevanoongorora kutsanangura chokwadi chemisika yemari. Zvese munzvimbo dzemunyika uye kunze kwemiganhu yedu. Chii chinonzi uptrend chinowanzo nyonganiswa ne rebound. Hazvishamisi kuti kufamba uku hakusi kwechimiro, asi a yakajeka kujekesa kune akawandisa masheya.
1 Kudzoka: Nei zvichiitika?
2 Chii iwe chaungaite pane iyo rebound?
3 Ko kana iyo rebound ikaramba iripo?
4 Ndedzipi nzira dzako?
5 Sei vachiumbwa?
6 Makiyi ekutengesa pama bounces
Kudzoka: Nei zvichiitika?
Icho hachisi chakavanzika kuti kwayakatangira kuri pachena uye kunopa kusahadzika, kana zvirinani kushoma. Chirevo chekutanga chekuti zviitike ndechekuti panofanirwa kuve ne kumashure downtrend. Pasina iyo, hazvigoneke kuti kufamba uku kukure mumisika yemasheya. Vachave chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya, asi zvirokwazvo izvo zvinodzokororwa hazvisi, kana chimwe chinhu chakafanana mukushanda kwavo.
Chimwe chehunhu hwayo hukuru ndechekuti haina kumboita anonaya kukosha kwekudonha kwakapfuura. Izvo zvakatomboitika chaizvo kune rebound yekusagadzikana kudiki zvekuti vanogona kungogara kwemaawa mashoma. Zviri nyore kwauri kuti uzvitarise mumisika sezvo ivo vachikura neimwe frequency. Kuva musungo uyo varimi vane kudzidza kushoma vanowira mukati Ivo vanowanzo tenga masheya achitenda mune yakawandisa mhinduro kubva kumisika yemari.
Kukupa iwe zano rekuti chii kufamba uku, hapana zvirinani kupfuura muenzaniso unoshanda. Fungidzira kuti mutengo wekambani inotengeswa neruzhinji yakadzikira neinenge 20%. Zvakanaka, nekuda kwekuwedzeredza kwarinopa, zvakajairika kuti ine kumusoro kumusoro sekuita kune vakawanda vatengesi variko. Ivo vanogona kudzoreredza 2%, 4%, kana kunyangwe chimwe chinhu chakanyanya mukukosha kwayo chaiko. Asi kwete zvimwewo zvakare, sezvo isu tisingazotauri nezve rebound, asi chimwe chinhu chinopedzisa.
Chii iwe chaungaite pane iyo rebound?
Mune equities iwe unofanirwa kuve unoshanda kupfuura zvimwe zvese. Uye kana iwe uri kufunga nezvekuwedzeredza, iwe unofanirwa kuziva zvaunofanira kuita nenzvimbo dzako muzvikamu. Ichave iri gadziriro yakakwana ye bvisa nzvimbo dzako, kunyanya kana iwe uinazvo nemari hombe, uye kunyangwe kana iri shoma. Kana zvichikwanisika munzvimbo yepamusoro-soro yezvinyorwa. Aya mamiriro akajairika pakati pevatengesi, uye zvirokwazvo zvakatoitika kwauri.
Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya kana iwe uri mukurasikirwa. Zano rako harizove rakafanana, asi uchafanirwa kurisiyanisa kuti ubatsirwe. Kuburikidza nemaitiro maviri mukutungamira kwezvaunoda. Kune rimwe divi, unogona padhuze kudzivirira kutora zvimwe kurasikirwa. Kumirira gare gare kuti zvinoitika mumisika yemari ichinje.
Uye kune iyo imwe, kana iwe ukaenda kune yepakati nepakati yakareba, iwe chengetedza nzvimbo dzako netariro kuti musika wemasheya unogona kuchinja uye zvishoma nezvishoma kudzorera kukosha kwawakawana kuchengetedzeka. Mune ino kesi ingangove mhinduro yemusimari ane yakajeka yakajeka chimiro. Iyi ndiyo yako chaiyo kesi? Nekuti dai zvanga zviri izvo, zvaizokupa chinenge chinhu chimwe chete icho chaicho chakakwira kumusoro chiitiko chingaitwa.
Ko kana iyo rebound ikaramba iripo?
Panogona zvakare kuve nemamiriro ekuti rebound inogona kugara kwemazuva mazhinji, kunyangwe mavhiki. Zvichava zvakawanda zvinonyanya kubatsira kuita kwenguva pfupi sezvo iwe uine chikamu chakakura chemazuva. Kunyangwe iwe uine mukana wekuita yako yekuchengetedza inobatsira panguva ino yenguva. Nekudaro, iko kusimba kwekutama kuita nekuti inogona kupedzwa chero nguva. Uye semhedzisiro yavo, dzima zano rako, pamwe nemukana wekuvandudza kurasikirwa mukushanda kwemusika wemasheya.
Usakanganwa izvozvo hausi kutarisana nedenga rekumusoro semamwe mamiriro ezvinhu awakamboona mumisika yemari. Iwe unogona kusvika pamhedziso yekuti zvaive zvisina kukodzera kuvhura zvinzvimbo sezvo iyo equation pakati pekudzoka nenjodzi isiri iyo inonakidza kwazvo kune zvako zvaunofarira. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekumirira nguva dziri nani kuti uuye kuzoshanda neaya mare emari.
Sezvo rebound ichienderera, iyo mikana iwe yaunowana kuti ibatsire imwe neimwe yemabasa iwe awakavhura ichave yakakura. Zvisinei, zvichave zvakakosha izvo kukoshesa njodzi kuti kufamba uku kunosanganisira nekuti zvinogadzirwa mumamiriro ekunze, sezvatatsanangura kare. Ndiwo mutengo waunofanirwa kubhadhara pakutora mitengo pamatanho aya ekutora mari. Kubva apo rebound painopera nechengetedzo yese iyo mitengo ichadonha zvakare mune yavo yekota. Zvichida zvakanyanya kutyisa kupfuura nakare kose.
Ndedzipi nzira dzako?
Wakatarisana nemamiriro ezvinhu akaomesesa aya, hauzove nesarudzo kunze kwekutsanangura zvakajeka zviitiko zvako. Saka kuti usazvione uri mumamiriro asingadiwe. Pamusoro pazvose, kutengesa pamabhunu dzinofanira kunge dzakapfupika duration. Pasina kupinda mubhizimusi, zvakanaka kuti uvhare zvinzvimbo uye unakirwe nemari inowanikwa. Usaedze kurebesa maitiro nekuti anogona kunge aine magumo asingatarisirwe.
Kune rimwe divi, kana iwe ukatengwa mune chengetedzo, inogona kunge iri chikonzero chakakwana chekusiya zvinzvimbo, chero iri bhajeti rezvako zvekuchengetedzeka. Kusvika zvirokwazvo iwe uchivaitira mune yakashata mamiriro zvine chekuita nemitengo yezvakatengwa. Kunyangwe zvazviri ndezvekuti kurasikirwa kuri kushoma, uye kuti hazvikanganise zvakanyanya chiyero chakajairika chemidziyo yako.
Chimwe chiito chaunogona kuisa mumisika yemari kuyedza kusvika pamitengo yekupinda mumisika yemari. Pasina chimwe chinangwa kunze kwekusiya nzvimbo dzako dzekutenga. Kunyanya kana maitiro aya akareba uye anogona kutora mamwe mazuva, kana kunyangwe mavhiki.
Ehe neichi chiito chekugadzirisa yemisika yemari pachavo. Sezvo kutengesa kwave kumisikidzwa pakutenga, panofanirwa kuve nemhinduro kubva kwavari. Uye zvakare, maoko akasimba emusika - ndokuti, vatengesi vakuru - tora mukana wekutenga masheya ayo anotengesa pazvikosha zvakakosha mumitengo yavo. Mune mashandiro epfupi-pfupi, izvo zvinonyatsokutsausa nezvavanoda.
Ndicho maitiro echinguvana Izvo hazvifanire kukumisa iwe kubva pakuona pasi pemisika yemari. Ukasadaro, iwe unozokanganisa zvakakomba zvaunofanira kuzvidemba gare gare. Kudzoka kwakanyanya kukodzera kune varimi vane hurefu uye hwakareba ruzivo mune irworwu rwechigadzirwa mari kuti vave vatengesi.
Kutengesa mari kunoiswa pachena pakutenga uye izvi zvinokonzeresa kuti izvi zviitwe zvakanyanya mumisika yemari. Mune rebound, zvakajairika kuti kuve nekuvandudzwa kwezuva nezuva pamusoro peiyo 2% chipingamupinyi, kunyangwe yakakwira. Hazvishamise kuti ivo vanokwezva kutarisisa kwakawanda kune vashoma nepakati varimi. Iko mashandiro anouya mukutamba panguva dzeaya akasarudzika mamiriro mumusika wemasheya.
Chero zvazvingaitika, iwo haasi mafambiro aunogona kubuda kubva kumamirionea. Kuhwina hongu hongu, asi chimwe chinhu. Nezve izvo iwe unotova neanosimudzira mamiriro, mauri iwe aunogona kuita inobatsira kusevha pasi pemahombekombe epamusoro mumabhenefiti. Zviri nyore kuti iwe uzvirangarire kune ako anotevera mashandiro mumwedzi inotevera. Iko, pasina kupokana, pachave nekuwanda kwekudzoka, kupfuura zvaunofungidzira izvozvi.
Makiyi ekutengesa pama bounces
Kana chiri chishuwo chako kutora chinzvimbo mumisika nguva dzese padzinoonekwa chimwe chezviverengero izvi, zvichave zvakakodzera kuti iwe upinze mimwe mitsetse yezviito zvinopa simba kuzvisarudzo zvauri kuzoita mumamiriro ezvinhu aya hunhu hwechitoko. musika. Nyora pasi mamwe mazano achakubatsira iwe.
Tora mukana wavo ku inoshanda nemazwi mashoma, asi kwete zvakare. Chero kusava nehanya iwe kwaunogona kubhadhara zvakanyanya, uye hazvina kukodzera kuisa mari yako nenzira iyi.
Usatarise kuwedzera semukana wekuita purofiti. Asi kazhinji sechikonzero che unovhara nzvimbo muhomwe.
Kana iwe ukapinda panguva dzezviitiko izvi muchikamu chemari iri izvo yakaderera huwandu husina kunyanya kukwirira. Zvirinani iwe kudzikamisa mipiro yemari kune iwo mashoma.
Kuburikidza nerudzi urwu rwekutengesa masheya hauzokwanisi kutora chero chikamu. Kana kuseta zvinangwa zvakakwirira kwazvo.
Ive nekuchenjerera zvakanyanya nezvakadzorerwa mumusika wemasheya, nekuti gare gare iwe uchauya, kana kuti ndoda ichaenderera nekuderera mumitengo yavo. Kusvika kusvika pamatanho pazasi pemamiriro azvino. Kungwara kunofanirwa kuve kwakakurumbira pazviito zvako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iwe unonyatso kuziva nzira yekutora mukana wekudzoka mumusika wemasheya?
Naturhouse, nyeredzi yemusika wekutengesa munaGunyana
Maitiro ekuverenga yako kugadzirisa